Mayelana Nathi - BASILE MACHINE Tool
I-Corporation Isingeniso Esifushane
Emphakathini wanamuhla, izinhlobonhlobo zemikhiqizo ehlukene iye yaqashwa yonke indawo emikhakheni ehlukahlukene ehlukahlukene, njengezezimoto, izimboni, nezihloko zasendlini, njll. Nokho, ngezinye izikhathi, abantu bazongibuza ukuthi iyiphi imikhiqizo oyenzayo noma kuphi. ngingayibona imikhiqizo yakho empilweni yethu?Kalula nje, ukusetshenziswa kwezimoto akuyona inkambu engajwayelekile.Sishayela izimoto nsuku zonke, kodwa esingakwazi ukuthi kunezinkulungwane zezingxenye zemoto ezingenziwa yi-CNC Machining ne-Sheet Metal, njengohlaka lwemoto, izingxenye eziklanywe ngokwezifiso ngisho nesikulufa.Yilokho esikwenzayo.
I-Basile Machine Tool (Dalian) Co., Ltd. (BMT) yasungulwa ngo-2010 inombono ocacile: Ukusebenzela Izingxenye Zomshini Zokunemba ze-CNC, Izingxenye Zensimbi Yeshidi kanye Nezitembu.Kusukela ngaleso sikhathi, i-BMT ibikhiqiza izingxenye zomshini ezinembayo eziphezulu zezimboni eziningi, okuhlanganisa Izimoto, Ukucutshungulwa Kokudla, Imboni, I-Petroleum, Amandla, Indiza, I-Aerospace kanye nezinhlobonhlobo zezinye izingxenye ezinokubekezelelana okuqinile nokunemba okuphezulu.Ngaphansi kokuqondisa nokugadwa Ochwepheshe Base-Japan Nonjiniyela Omkhulu Wase-Italy, sinokholo olungapheli ekunikezeni Imikhiqizo Yomshini Yekhwalithi Ephezulu ye-CNC kanye Nezingxenye Zensimbi Nezitembu Zeshidi.
I-BMT Ibhizinisi Ngenhloso Eyodwa Yokuxazulula Izinkinga Zakho Zokukhiqiza Ezishintshayo Ngokushesha!Isixazululo Sokukhiqiza esivela ku-BMTIzingxenye Zomshini ze-CNC, Nezingxenye Zensimbi Nezitembu Zeshidi.Ndawonye sizozulazula olwandle Lokuklama, Isikhathi Esiholayo kanye nokuguquguquka kweBhajethi futhi senze inqubo yakho yesinqumo isheshe.Kodwa sikwenza kanjani?Impendulo ilula ~NGEMPELA SINAKEKELA.
Ngokuhamba kweminyaka, i-BMT yaba uchwepheshe wemishini yokunemba ocatshangwa kahle enamasethi angaphezu kuka-40 eMishini ye-CNC, efana ne-CNC Lathes, i-CNC Machining Center, i-Lathe Machine, i-WEDM, i-Milling and Drilling Machine, umshini wokusika, umshini wokushisela i-Panasonic, njll. .
Ukuze sifinyelele okulindelekile okukhuphukayo, i-BMT ibambisene neNkampani yase-Italy eyodwa kusukela ngo-2016, iklama futhi ithuthukisa Izimbawula Zethuluzi Lomshini (Utility Model Patent No.: ZL 2019 2042 3661.3).
Ngephrojekthi ngayinye ephumelelayo, isithunzi sethu sakhula, okusenza sikwazi ukwandisa kancane kancane isisekelo samakhasimende ethu ngokwendawo nangokombono wemboni.
Namuhla, Izingxenye Zomshini ze-BMT zingatholakala emhlabeni wonke, zenza zonke izinhlobo zomsebenzi womshini kwezinye zezinkampani ezihamba phambili emhlabeni, njengeToyota, BMW, Toshiba, Mori Seiki, njll.
Kungani Ubambisene ne-BMT?
Yini i-BMT engayenza?I-BMT ikhona ukuze isuse ubuhlungu bakho.Sisebhizinisini ukuze sibe abalingani bakho kuzo zonke izigaba zokuthuthukiswa komkhiqizo nokukhiqizwa ngokwezifiso.Nguwe kuphela odinga ukuthembela kithi! Kulula Kakhudlwana Ukusebenzisana Nabo, Siyashesha Ukuphendula futhi Sithuthuka Ekuthinteni Kwethu, futhi sizoqondisa ithimba lakho labathuthukisi esiphithiphithini ukuze senze izingxenye zakho zekhwalithi zikhiqizwe ngokushesha nangenani elingcono kakhulu.
Kungani ubambisana ne-BMT?Ngoba Abantu Bakithi Bawenza Umehluko.Sihlanganisa ubuchwepheshe bakamuva nesevisi eyingqayizivele evela kochwepheshe abanothando ukuze sihlangabezane nezidingo zakho njengoba kungekho omunye umuntu ongakwenza.
Ekuqhubekeni nokwenza kwethu okuhle okuqinisekisiwe, sibheke ngabomvu ukusungula ubambiswano lwesikhathi eside, oluzuzisayo namakhasimende engeziwe ngesimo sethu sengqondo sobungcweti, ubuciko obuphambili kanye nezinsizakalo ezisezingeni eliphezulu.Siyaqiniseka ukuthi i-BMT ingaba inketho yakho engcono kakhulu uma ufuna umkhiqizi wemishini yensimbi enekhwalithi ehamba phambili ekilasini kanye nezinsizakalo ezichwepheshile.
Siyaqiniseka ukuthi i-BMT ingaba inketho yakho engcono kakhulu uma ufuna umkhiqizi wemishini yensimbi enekhwalithi ehamba phambili ekilasini kanye nezinsizakalo ezichwepheshile.
Custom Machining, Precision Machining Izingxenye, Izingxenye Zensimbi Zeshidi Eliphezulu Ezenziwe Ngokwezifiso, Ukwenza imishini, Cnc Titanium Machining, Precision Machining,